Doro trano, herisetra, fisamborana tany Befandriana Avaratra… : afa-baraka ny… polisim-pirenena | NewsMada
Doro trano, herisetra, fisamborana tany Befandriana Avaratra… : afa-baraka ny… polisim-pirenena
Niteraka resabe ny hoe ”valifaty” nataon’ireo polisy, tamin’ny alalan’ny fandorana tanàna, fampijaliana natao tamin’ireo olona nosamborina…, taorian’ny fahafatesan’ireo polisy roalahy matin’ny fitsaram-bahoaka, tany Befandriana Avaratra. Nolavin’ny minisitry ny polisy, Anandra Norbert anefa ny fisian’izany rehetra izany.
Valifaty, daroka niampy fampandohalihana, olona 300 mahery nosamborina, dorana ny trano sns, izay no voalaza fa nataon’ny polisy 50 lahy avy aty Antananarivo, tany Antsakabary Ambalamanga, Befandriana Avaratra, afakomaly. Niambina ny tobiny ny zandary nanoloana izany, ny amin’ny mety hisian’ny fanafihana?
Niely tamin’ny radio, nanerana ny tambajotra sosialy teto an-dRenivohitra momba ity resaka ity. Hatramin’ny olona avy any Befandriana niditra tamin’ny telefaonina tamin’ny radio, fanehoan-kevitra nanerana ny Facebook. Fahafaham-baraka sy fanomezan-tsiny ny polisy tanteraka.
Nitondra valin-kafatra avy hatrany tamin’ny mpanao gazety omaly ny minisitry ny filaminam-bahoaka, Anadra Norbert, teny Anosy manodidina ilay raharaha famonoana polisy tany Befandriana Avaratra, tany Antsakabary Ambalamanga. “Tsy fitsaram-bahoaka no niseho tany fa famonoana olona. Polisy nanao ny asany ireo maty ireo, ary ny sefo distrika no naniraka azy ireo hamita asa tany Antsakabary, kanjo novonoin’ny olona”, hoy ny minisitra. Nanamafy koa ity farany fa diso ihany koa ny filazana an-gazety fa nampiasa herisetra ireo polisy avy aty Antananarivo nalefa nisambotra ireo namono ireo polisy tany an-toerana. “Tsy misy ny olona maty voatifitra na iray aza, tsy nandoro trano ny polisy, fa andian’olona sy olona adala iray no nandoro trano rehefa niala teny ny polisy”, hoy ny minisitra.
Mbola nilaza ihany ity tompon’andraikitra voalohan’ny filaminam-bahoaka ity, fa tokony hilaza izay loharanom-baovao mivoy izany ny mpanao gazety na izay nanaparitaka izany tamin’ny tambajotra sosialy. Lavin’ny polisy tanteraka noho izany ny filazana fa nanao herisetra ary nitifitra nahafaty olona roa izy ireo tany Antsakabary Ambalamanga. Tsy nisambotra ny ben’ny Tanàna sy ny lefiny koa ny polisy fa nampiantso azy ireo mba hahafahana mamantatra ireo olona namono ireo polisy roa lahy. Olona 40 nolazain’ny polisy fa nalefa any Antsohihy hatao famotorana.
Nahita ny raharaha ny zandary
Na teo aza ny filazana avy amin’ny olona avy any Befandriana Avaratra momba ny herisetra nataon’ny polisy, sy ny filazan’ny avy amin’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, fa tsy nisy izany ary tsy nampiasa hery ny polisy, tsy nisy ny olona maty; ny zandary nahita ity toe-javatra ity. Araka ny loharanom-baovao sy ny fanamarinana avy any an-toerana, nahita ny fahatongavan’ireo polisy ireo ny zandary. Tsy niditra an-tsehatra kosa satria tsy nanana fahefana tamin’izany, ary nahita ny fampiasan-kery tamin’ireo mponina. Voalaza fa niambina ny tobiny ireo zandary ny amin’ny mety hiitaran’ny savorovoro any amin’izy ireo. Nanao ny fijerena ifotony ny zandary rehefa lasa ny polisy ary nilaza fa nisy ramatoabe iray maty, may kila tao an-tranony.
Miandry izay tohin’ny raharaha ny rehetra. Inona ny hiafaran’ny fanadihadiana? Hijanona eo amin’ny polisy ihany izany, sa mety handray an-tanana izany koa ny zandary, indrindra taorian’ny resaka fampijaliana sy herisetra, sy ireo trano may ary olona iray maty.